अस्थायी शिक्षकसँगको सम्झौता गैह्रकानुनी : डा वाग्ले - eNepalikhabar.com
गृह अस्थायी शिक्षकसँगको सम्झौता गैह्रकानुनी : डा वाग्ले
अस्थायी शिक्षकसँगको सम्झौता गैह्रकानुनी : डा वाग्ले
अस्थायी शिक्षकका आन्दोलनक कारण सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा पटक पटक प्रभाव पर्दै आएको छ । यसले गुणस्तर खस्कनुका साथै विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलबाड हुन पुगेको छ । समयमै अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा शिक्षाविद् प्रा. डा मनप्रसाद वाग्लेसँग गरिएको कुराकानी :
लगातार हुने अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनका बारेमा तपाईँको धारणा के छ ?
अस्थायी शिक्षकका मागलाई शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले सम्बोधन गरेकै हो । फेरी शिक्षा मन्त्रालयले गत असार ९ मा गैह्रकानुनी सम्झौता ग¥यो । अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने अवस्था आएपछि समस्या झन् जटिल बन्दै गईरहेको छ ।
अस्थायी शिक्षक समस्याको समाधान कसरी गर्न उचित हुन्छ त ?
अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेकै अवस्थामा पनि आगामी भदौ ३ गते हुने आन्तरिक परीक्षाबाट २६ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजार शिक्षक स्थायी हुने बाटो त रोकिएको छैन । अस्थायी शिक्षकहरुले अनेक बखेडा निकालेर यो स्थिति आएको हो । कहिले समावेशी भन्ने कहिले धेरै सुविधा चाहियो भनेर । अर्को विकल्पमा आठौँ संसोधनले दिएकै अधिकार प्रयोग गरेर अस्थायी शिक्षकहरुलाई केही सुविधा दिएर विज्ञापन रद्द गराएर खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कस्तो छ ? यसमा शिक्षकको भूमिका ?
हालसम्म शिक्षामा भएको व्यवस्था अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट उचित ध्यान नपुग्दा सोचेजति र राज्यले लगानी गरेजति प्रतिफल निस्कन सकेको छैन । तर अब शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेपछि भने सामुदायिक विद्यालय प्रतिष्पर्धामा जान थालेका छन् । जिशिअ, स्रोतव्यक्तिलगायतको शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीले गरेको बेइमानीले आज गुणस्तरीयतमा प्रश्न उठ्न थालेको हो । अब पत्रकार, शिक्षाविद्, शिक्षक सबै मिलेर शिक्षाको खस्किएको गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ ।
शिक्षा गुणस्तरीय नहुनुलाई विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायको दोषसँग जोडेर पनि हेर्ने कि ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्य संकायभन्दा शिक्षाशास्त्र संकायको नतिजा एकदम नराम्रो छ । लगभग २२ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुने गरेको तथ्याङ्क छ । अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तिणए भएका छन् । तर बाँकी उत्तिर्ण भएकाले राम्रै गरिरहेका छन् । अब नेपालको शिक्षा सुधार्ने जिम्मेवारी उनीहरुकै काँधमा छ । तर त्यसो भन्दैमा सबै शिक्षाको दोष शिक्षाशास्त्र संकायलाई मात्र दिएर अरु शिक्षा सम्बद्ध निकायहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुहुँदैन ।
प्रस्तुति : दीपेश गर्तौला
(0.016392 seconds )